Muxuu Pochettino ku yiri ciyaartoyda Tottenham kahor Mucjisadii ay Xalay ugu soo bexeen Final ka Champions League?? – Gool FM
Muxuu Pochettino ku yiri ciyaartoyda Tottenham kahor Mucjisadii ay Xalay ugu soo bexeen Final ka Champions League??
(Europe) 09 Maajo 2019. Difaaca kooxda Tottenham Hotspur ee Danny Rose ayaa shaaca ka qaaday hadaladii uu ku yiri tababare Mauricio Pochettino ciyaartoyda Spurs-ka, taasoo sababtay inay ku hor sameeyaan soo laabasho ay taariikhda kubadda cagta xusi doonto qeybtii laabaad ciyaarta, kulankii ay xalay la ciyaareen kooxda Ajax.
Kooxda Tottenham Hotspur ee oo 2-0 loogu hogaaminayay qeybta hore ee ciyaarta isla markaana ay Ajax sidaas ku heysato 3-0 marka leyska daro gooalasha ay dhalisay labada labada kulan ee wareegan, ayay Spurs-ka soo barbareysay qeybtii labaad ee ciyaarta, kaddib markii uu laacibka reer Brazil ee Lucas Moura uu dhaliyay 3 gool, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 3-3, taasoo ka dhigtay inay balan kaga sameystaan Liverpool kulanka finalka ee tartanka Champions League.
Hadaba Danny Rose ayaa ciyaarta kaddib wuxuu warbaahinta u sheegay wax uu Pochettino ku yiri ciyaartoyda Tottenham kahor Mucjisadii ay xalay kaga soo baxeen Ajax wuxuuna yiri:
“Waan ka niyad jabnay wixii dhacay qeybtii hore, sababa la xiriira qaabkii aan u ciyaarnay, laakiin qeybta nasiinada kaddib ayaan sameynay sare u kac weyn”.
“Tababaraha ayaa noo soo bandhigay kooxda Liverpool xilli aan ku sugneyn hotel-ka hor ciyaarta”.
“Macalinka wuxuu noo sheegay in nafteena aysan ku mashquulin guuldarada, xitaa haddii aan guuldareysano waa inaan u guuldareysanaa si haboon, waxaana nasiib u yeelanay inaan u soo gudubno kulanka finalka”.
Geesigii xalay lugtiisa ku soo saaray Tottenham oo hadlay iyo Eriksen oo soo jeediyay in Taalo loo dhiso